Umaki: ukulahlwa kwenqola yokuthenga | Martech Zone
Umaki: ukulahlwa kwenqola yokuthenga
Enye yentuthuko ejabulisa kakhulu ekuthengiseni okuzenzakalelayo kulo nyaka, ngombono wami, kube ukuthuthuka kwezixazululo ezingabizi ukwenza ukuthengisa kwakho kwe-ecommerce kube lula. Amapulatifomu wesiko lokumaketha wendabuko kufanele ahlanganiswe bese kuthi umkhankaso ngamunye uthuthukiswe ngokuhamba kwesikhathi - ukuqaliswa kungathatha amasonto noma izinyanga ngaphambi kokuqala ukubona imali. Manje, la mapulatifomu amasha awagcini nje ngokuhlanganiswa okukhiqizwayo, anemikhankaso ekulungele ukwethulwa ngokushesha okukhulu
Carts Guru: Marketing Automation ye-Ecommerce
NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2020 NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2020 Douglas Karr
Kuyishwa ukuthi amapulatifomu e-ecommerce akwenzi ukumaketha kube yinto eza kuqala. Uma unesitolo esiku-inthanethi, awusoze wahlangabezana namandla akho aphelele wemali ngaphandle kokuthi ukwazi ukuthola amakhasimende amasha futhi wandise amandla emali engenayo yamakhasimende amanje. Ngokujabulisayo, kunezinhlobo eziningi zamapulatifomu wokumaketha ezenzekelayo lapho ahlinzeka ngawo wonke amathuluzi adingekayo ukukhomba ngokuzenzakalela amakhasimende lapho kungenzeka avule khona, achofoze, futhi athenge. Enye yazo
NgoLwesine, ngo-Okthoba 22, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 22, 2020 Douglas Karr
Ngimangala njalo lapho ngihlangana neklayenti ngenqubo yokuphuma online futhi ukuthi bambalwa kangakanani kubo abaye bazama ukuthenga kusayithi labo! Elinye lamakhasimende ethu amasha belinengosi abatshalile kuyo imali eyizigidi futhi kuyizinyathelo ezi-5 ukusuka ekhasini lokuqala uye enqoleni yokuthenga. Kuyisimangaliso ukuthi noma ngubani ufinyelela kude kangaka! Kuyini ukulahlwa kwenqola yokuthenga? Kungenzeka
Ungayinciphisa Kanjani futhi Uyithole Kanjani Izinqola Zokuthenga Ezilahliwe
NgoLwesine, ngoMashi 1, 2018 NgeSonto, ngoMashi 4, 2018 Douglas Karr
Esikhathini esedlule, ngabelane ngama-athikili ambalwa - kufaka phakathi ukuklama ikhasi eliphelele le-ecommerce checkout - ukugwema izinqola zokuthenga ezilahliwe, kepha ngiyaqhubeka nokusebenza namakhasimende anenkinga yokwandisa ulwazi lomsebenzisi we-ecommerce nesipiliyoni sokuphuma. Ayini Amanani Okulahlwa Kwezinqola Ezijwayelekile? Ideskithophu - Amanani Okulahlwa Okumaphakathi angama-67.1% weThebhulethi - Amanani Okushiya Phansi angama-70% Ifoni - Amanani Asezingeni Lokulahlwa angama-77.8% Isiza sakho asisoze sazuza
Umphumela Wezixazululo Zokukhokha Eziphephile Ekuthengeni Ku-inthanethi
NgeSonto, uDisemba 18, i-2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Uma kukhulunywa ngokuthenga online, isimilo se-shopper sehlela ezintweni ezithile ezibucayi: Isifiso - noma ngabe umsebenzisi uyayidinga noma cha into ethengiswa ku-inthanethi. Intengo - noma ngabe izindleko zento zehlulwa yileso sifiso noma cha. Umkhiqizo - noma ngabe umkhiqizo ukhangisiwe noma cha, ngezibuyekezo zivame ukusiza esinqumweni. Thembela - noma ngabe umthengisi othenga kuye angakwazi noma cha